Roobka Gu’ga oo ka curtay Awdal – Radio Daljir
Roobka Gu’ga oo ka curtay Awdal
Abriil 5, 2016 1:10 g 0
Barbara, 05 – April – 2016 – Wararka ka imaanaya gobolka Awdal ayaa sheegaya in roobka Gu’ga uu ka billowday deegaanno ka tirsan gobolkaas.Roobka ayaa ku soo beegmay xilli abaar daran oo saamaysay dadka iyo xooluhuba ay ka jirto gobollo badan oo uu kamid yahay gobolka Awdal.
Roobka intiisa badan ayaa ka da’ay magaalada Boorama, deegaannada xeebta ku teedsan, Dilla, Kalabayr iyo deegaanno kale.
Inkastoo uusan xoog badnayn roobka ka da’ay Awdal, haddana wuxuu farxad iyo yididiilo galiyay dadka ku nool gobolka oo ku qabowsaday.
Gobolka Awdal ayaa ugu daran gobollada Soomaaliyaoo ay abaartu saameynta ku yeelatay, waxaana ka socda dadaallo lagu samata bixinayo dadka dhibaataysan.
(Dhagayso) Faysal Roble: Inkastoo Nidaamkii xaaraanta la qaatay, hase ahaatee doorashada Garowe halagu qabto
Xildhibaan lagu weerary Muqdisho iyo laba qof oo dhimatay